Noocyada khadadka tattoo, midkee ayaa loo isticmaali karaa kiis kasta? | Tattoo
Noocyada khadadka tattoo
Susana godoy | | Fanaaniinta Tattoo, Tattoos
Markaan xiisaha u qabno mowduuc, waan baari karnaa oo aan ka ogaan karnaa waxyaabo mararka qaar aan maskaxdeenna ka soo gudbi lahayn. Maanta xiisaha ayaa ii horseeday inaan isweydiiyo inay jiraan wax kabadan iyo in kabadan nooca khad in la sameeyo xaraashka.
Ka dib markaan xoogaa baadhay oo aan ku dhex mushaaxay meelo kala duwan oo shabaqa ah, jawaabtu waa haa, waxaan ka helnay waxyaabo kala duwan noocyada suumanka si loogu fuliyo shaqooyinka farshaxanka maqaarkayaga, wax aanan anigu shakhsi ahaan garanayn. Ma rabtaa inaad wax yar ka ogaato dhammaantood?
1 Noocyada khad Tattoo: Khudaarta cagaaran
2 Khadka dardaaran ama midabbada akrilik
3 Tattoo-yada loo yaqaan 'Tattoo' ayaa lagu ansixiyay Spain
4 Khadadka Tattoo-ka loo yaqaan 'Ultraviolet Tattoo Ink'
5 Inkasta Tattoo Fluorescent Tattoo
6 Tattoo khad cad
7 Khadka taatikada ah ee bilaa biraha ah
Noocyada khad Tattoo: Khudaarta cagaaran
Had iyo jeer waxaa jira oo jiri doona dhammaan noocyada wada-hadalka, iyo sidoo kale fikradaha, inta udhaxeysa nooc khad iyo mid kale. Dhinac, waxaan haynaa kaydka khudradda, kuwaas oo ah kuwa isticmaala noocyada khudradda noocyadooda. Sida muuqata, waxay dhasheen markii qaar tattooists ah aysan rabin inay la shaqeeyaan feeraha yeelan kara xeryaha xayawaanka. Markaa iyagu iyagu iyagu waxay ahaayeen kuwa qaaday tallaabada isku-darka. Dabcan, nidaamkan waa inuu nidaamiyaa sharciga si loo dabakho. Si tartiib tartiib ah ayaa loo gaadhay iyo khad khudradeed ayaa u muuqday inuu nolosha siinayo naqshadaha waaweyn.
Faa'iidooyinkeeda, waxaan dhihi karnaa in laga dhex beero xeryahooda, inay ahaato mid dabiici ah, ma jiri doonaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah ee falcelinta xasaasiyadda. Markaa jidhku si fudud ayuu ugu dulqaadan doonaa, isagoo ku sagootinaya xasaasiyadda, cuncunka, iwm. Laakiin waa run in kiiskan, midabada laga yaabo inaanay u muuqan mid la mid ah noocyada kale ee faleebada. Sidoo kale, tani waxay ka dhigan tahay in khadku waxyar ka dheereyn karo noocyada kale. Waxaa jira dhowr nooc oo suuqa yaal oo kaliya la shaqeeya 100% faashad vegan.
Khadka dardaaran ama midabbada akrilik
Biraha waa iskudhafka ugu weyn ee noolaha noocan ah tanina waa farqiga weyn ee la xiriira kuwii hore. Dhexdooda, leedhka ayaa soo muuqan kara markaan kahadalno khad cagaaran. Halka midka cas iyo kan sababi kara noocyo badan oo dhibaatooyin ah, wuxuu yeelan doonaa meerkuri. Zinc waa birta loo isticmaalo midabka hurdiga ah iyo chromium sidoo kale cagaarka iyo buluuga. Waxa ugu badan ee loo isticmaalo khad madow waa nikkel.
Tani waa saldhigga feeraha, laakiin goor dambe, waxay leeyihiin qaybo badan. Maxaa sameeya marka la soo koobo, noocyada taangiyada tattoo ee ah synthetic ama acrylic, waxay ku siin karaan jawaab celin dheeri ah qaabka xasaasiyadda. Waxaan soo sheegnay mar labaadna waxaan ku adkeysaneynaa in kuwa ugu badan ee keena ay tahay casaan, maadaama ay ka kooban tahay macdan badan. Dabcan, ka mid ah faa'iidooyinkiisa, khadadka noocan ahi waxay leeyihiin dhammaystir badan oo iftiimaya natiijooyinka midabkiisuna aad bay u kacsan yihiin. Sida khudradda oo kale, way kala duwanaan karaan, laakiin si gaabis ah oo ku xiran nooca maqaarka, taas oo waliba muhiim ah.
Tattoo-yada loo yaqaan 'Tattoo' ayaa lagu ansixiyay Spain
Doodda ayaa la soo waday muddo sannado ah. Maxaa yeelay khubaro badan ayaa ka cawday in khadku ka isticmaalo Spain oo ay iyagu ahaadaan faashad la isku qurxiyoIyagu ma ay ahayn kuwo tayo sare leh sida Yurub inteeda kale. Kaliya laba nooc oo khad gaar ah ayaa la heli karay. Maaddaama ay iyagu ahaayeen kuwa leh maaddooyinka u hoggaansamaya sharciga. Laakiin laga yaabee, inay ahaayeen kuwo aan degganayn sida kuwa kale ee suuqa jooga. Tani waxay u horseeday dad badan oo ku xardha tattoos-ka inay ku sameystaan ​​tattoos ay ku jiraan maaddada Yurub laakiin taasi kama sharciyeysan dalkeenna.
Tani waxay cadeyneysaa in Spain ay leedahay sharciyo aad u xadidan oo leh alaabada noocan ah, waxaas oo dhan waxaa ugu wacan falcelinta ay ku keeni karaan qofka. In kasta oo aysan had iyo jeer noqon doonin cilladda khadadka laftiisa, laakiin sidoo kale maqaarka iyo duruufo badan. Taasi waa sababta aad marwalba u baahan tahay weydii farshaxanka tattoo on astaamaha iyo khaanadaha ay adeegsato, si aad u ogaatid waxyaabaha ka kooban oo aad iskaga ilaaliso dhammaan noocyada dhibaatooyinka.
Khadadka Tattoo-ka loo yaqaan 'Ultraviolet Tattoo Ink'
Waa nooc kale oo ka mid ah noocyada khadadka ah ee loo yaqaan 'tattoos' laakiin dabcan, waa in la sheegaa inay ka badan yihiin kuwa wax garanaya ee aan ognahay. Marka way fiicantahay in looga tago asalka. Iyada oo ay taasi jirto iyo tan kaliya wuxuu iftiimin doonaa naqshadeynta nalka UV-gaWaa run inay guuleysteen oo ay sii wadaan. Dhinaca kale ayaa ah inay sababi karaan fal-celin xasaasiyadeed oo ka sii daran ama aad u tiro badan.
Inkasta Tattoo Fluorescent Tattoo
Taasi nashqada nuuca, taas oo kaliya loo arki karo inay tahay saameyn dhalaalaysa, sidoo kale laguma talinayo. Xaqiiqdii, looma tixgeliyo khad la ansixiyay. Iyaga waxaa la arki karaa oo keliya mugdiga marka lagu daro, khadku wuxuu ka kooban yahay fosfoor. Kani waa tan lagu guuleysto in kaliya laga dhigi karo mid muuqata meelaha bannaan ee iftiinka yar.
Tattoo khad cad
Way maqnaan kari waayeen markii aan ka wada hadalnay noocyada khadadka ku jira xaragada. Sababta oo ah iyagana marar badan baa la arkaa. Ugu horreyntii, waa inaan nidhaahnaa noocyada fikradaha ah marwalba waa inay sameeyaan dad khibrad u leh, oo maahan oo keliya inay yihiin tatoorooyinka guud ahaan, laakiin yaa si fiican u yaqaana nooca khad ay ku shaqeeyaan. Dhinaca kale, astaamaha leh khad cad ayaa u muuqda mid aan la dareemin, ahaansho muuqaal badan oo maqaarka madow ah oo uu libdho, isaga oo nooc nabar ah kaga tagaya noocyada kale ee maqaarka.
Khadka taatikada ah ee bilaa biraha ah
Markii aan xusno khadadka tattoo-ka biraha-biraha ah, waxaan ka hadlaynaa khudradda markale. Laakiin waa run in mararka qaarkood, ay sifiican isku garanayaan sidan, markaa waa inaan sidoo kale sheegnaa. Xaaladda jirta, midabbada midabka siiya midabkoodu wuxuu ka madhnaan lahaa xeryahooda waxyeellada leh.
Wax walba waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo waxyeellooyinkooda, laakiin waxa iska cad ayaa ah inaan go'aansan karno khadkee la isticmaalayaa gudaha waxbarashada tattooing ee aan u aadno. Hal xiiso dheeraad ah oo lagu xisaabtamo, gaar ahaan haddii aan haysanno dhibaatooyinka xasaasiyadda si fudud. Ma hilmaami karno inaan ku jirno shay maqaarkayaga hoostiisa ku soo dhaca, sidaa darteed inta aynaan is qiimayn, waa inaynu ka taxaddarno
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » Noocyada khadadka tattoo
xagee ka iibsan karaa timirta khudradda
Ku jawaab david rojas
corduroy halkee baan ka iibsan karaa khudaarta cagaaran ee loogu talagalay tattoos
Xagee ka iibsadaa midabbada ?????? Mahadsanid
Waad salaaman tihiin dhamaantiin !! Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii khad madow. waxay leedahay sulfate ama sulfa derivative maxaa yeelay xasaasiyad ayaan ku qabaa
Waxaan rabaa inaan ogaado waxa khad ah ee aan u isticmaali karo haddii ay dhacdo inaan ku deeqo dhiig ???
Ku jawaab Jarmalka
Tattoos qoorta oo dhan, meel adag oo xanuun badan
Tattoo tattoo si nasiibku kula jiro